सार्वजनिक भयो 'हावाको झोका अधेरी रातमा…' (भिडियो)
सार्वजनिक भयो ‘हावाको झोका अधेरी रातमा…’ (भिडियो)
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख ०१, २०७६१८:५८
संगीत । युवा कृषि हेम प्रभास यतिखेर निर्देशक भएका छन् । कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीमा एक वर्षे निर्देशनको कोर्ष गरेपछि हेम सर्ट फिल्म तथा म्यूजिक भिडियो निर्देशनमा उत्रिएका हुन् । आधा दर्जन भन्दा सर्ट फिल्मको निर्देशन गरिसकेका हेम प्रभासले कविताको दृश्य भिडियो वनाएर प्रयोग समेत गरेका छन् । यतिखेर हेमले आफ्नो पाँचौ म्यूजिक भिडियोको निर्देशन गरेका छन् । जुन म्यूजिक भिडियो यहि शुक्रबार रिलिज भइरहेको छ ।
हावाको झोका अधेरी रातमा… बोलको यो गीत विकाश थापाले लेखेका हुन् । अमेरीकामा रहेर पनि विकाश साहित्यिक लेखनमा सक्रिय छन् । यस अघि हेम प्रभासले प्रयोगात्मक रुपम निर्माण गरेको दृश्य भिडियो कविता पनि विकाशले नै लेखेका हुन् । हावाको झोका अधेरी रातमा… गीतमा विकाश थापाको शब्द, सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ । गीतलाई रामकृष्ण ढकालले गाएका हुन् भने गीतका एरेञ्जर देवेन्द्र नेवा हुन् । रेकर्डीङ तथा मिक्सिङ भने प्रकाश मिश्रले गरेका हुन् । एकोस्टीक नेपालमा गीत रेकर्डीङ गरिएको हो ।
गीतको भिडियो मुकेश हुँमागाईले खिचेका हुन् । कविता तोलाङगीले श्रृंगार गरेकी हुन् भने दृश्य सम्पादन राजेश कुमारले गरेका हुन् । वरिष्ठ अभिनेता सरोज खनाल, रीमा के।सी, सुजन थापा, सविना आचार्य, अनन्त सिग्देल, तीलक गौतम एवं संगीतकार सन्ताष श्रेष्ठ समेत फिचरिङ छन् । डिजिटल क्रियशनको प्रस्तुती यो गीत आरव प्रोडक्सनबाट निर्माण गरिएको हो । गीतलाई म्यूजिक नेपालले रिलिज गरिरहेको छ ।
क्याप्टेन अमेरिकाले लेखे ‘अन्तिम फिल्म’
साराले छाडिन् घर ?
फेस्ट रिभ्युमा रुचाइएन् ‘दे दे प्यार दे’
फिल्म प्रचारको लागि महोत्सवमा पुगे सलिन
चैत्र १ बाट सर्यो ‘लभ स्टेसन’
‘एउटीलाइ मुटुमा घर’ कभर डान्स कम्पिटिसन घोषणा
ब्याड्मिन्टन छाडेर अभिनय
‘घर’ को सिक्वेल बन्छ त ?
स्मिताको ‘जालैमा पार्छु’ सार्वजनिक (भिडियो)
नीतालाई आफुले पाउँदा मात्र राम्रो ?
नयाँ वर्षमा अनमोल र प्रदीपको ‘भिडन्त’ ?
एउटा फाइटमा ७० करोड खर्च
निराजन र लक्ष्मीको ‘भेट किन भयो’ सार्वजनिक (भिडियो)
पार्श्वगायनमा डेब्यु गर्दै आयुष
उदीपसँग नजिक आँचल !
Founder/Editor-in-Chief : Naresh Bhattarai
Editor : Pradip Karki
Photojournalist : Aryan Bimali
Designer : Vijay Bashyal